Umlayishi weFlickr ugcina uMhla! | Martech Zone
Umlayishi weFlickr ugcina uMhla!
NgeCawa, uJuni 3, 2007 NgoLwesibini, Oktobha 4, 2011 Douglas Karr
Ndingumsebenzisi othobekileyo Flickr kwaye okunene khange wenze okuninzi ngayo. Esona sizathu sokusebenzisa iFlickr yayiliqela leqela elandivumela ukuba ndenze u-I Khetha iqela le-Indy yewebhusayithi Ndikhetha u-Indy. Ukujoyina amaqela yinto ephambili kuyo nayiphi na indawo yokunxibelelana nabantu kwaye zonke zibonakala ngathi ziyabamba kwaye ziyazinikezela.
My unyana waphumelela kwisikolo samabanga aphakamileyo kwiveki ephelileyo (nge-3.81 GPA ehloniphekileyo, isifundi esincinci, kwaye wamkelwe kwinkqubo yeFizikiki IUPUI). Ndithathe iifoto ezimbalwa kwisidanga, ndazipha kwaye ndazithumela kuzo zonke izihlobo zethu. Ngokukhawuleza, ndiye ndaqala ukuba neengxaki… abanye abantu bayifumene ifayile kwaye abakwazi ukuyivula, kuba abanye bonakalisiwe, kwaye abanye zange bayifumane kwaphela.
Ngale ntsasa ndithathe isigqibo sokufaka imifanekiso kuFlickr kwaye ndabelana ngeseti nosapho lwam. Ngokwenene bendisoyika inkqubo, nangona… layisha, hlela, layisha, hlela, layisha, hlela. Ngaphambi kokuba ndiqalise, ndandwendwela i Icandelo lezixhobo zeFlickr ukubona ukuba yintoni etshintshileyo kwaye ndafumana iFlickr Uploadr:
Isebenze kakuhle ngokumangalisayo! Isikhalazo sam ekuphela kwaso kukuba ayibonisanga imifanekiso kwisixhobo kunye noqhelwaniso olululo (zilayishwe ngendlela eyiyo, nangona kunjalo) ndiye ndachitha ixesha elithile ndizama ukuqonda ukuba kuqhubeka ntoni. Nje ukuba imifanekiso ilayishwe, ndenza iseti, ndaza ndabelana ngayo nosapho kunye nabahlobo (ungathumela nge-imeyile ukuya kuthi ga kubahlobo abangama-50 kunye nosapho kwisithonga esinye)!
Kuhle kakhulu. Enkosi, Flickr! Ndiyathemba ukubona ezinye iindlela zokubonisa imifanekiso kwixa elizayo. Sele iinyanga okoko ndingene kwiFlickr kwaye akubonakali ngathi zikhona ezinye izixhobo ezongezelelekileyo zokubonisa imifanekiso kwi-bar esecaleni, kwifayile yefayile, kwisilayidi, njl.
View Imifanekiso yeBill yokuGqwesa
I-10 ye-ISP ephezulu ye-Spamming inokuKothusa
I-PHP: Ngaba ilula i-XML?
Juni 3, 2007 ngo-12: 22 PM
Ndikwazile ukuhambisa phantse bonke abahlobo bam ekusebenziseni iFlickr njengoko wonke umntu oyisebenzisayo efumana ujongano kulula ukuyisebenzisa. Ukusetyenziswa kwam ekhaya kujikeleza iMacbook yam kunye nePhoto, nangona kukho usetyenziso olwahlukileyo uFlickr alunikeza simahla aludibanisi nePhoto. Malunga ne-10 yeedola (ndicinga ukuba) ndithenge i-'FlickrExport' edibanisa ngqo kwi-iPhoto kwaye yenza ukulayisha + ukumaka kunye ne-doddle epheleleyo.
Ukundenza ndisebenzise into efana neFlickr kufuneka kube lula kungenjalo andizukuzikhathaza, njengoko sele kufuneka ndihambe ngayo yonke inkqubo yokuplaga kwikhamera yam kwaye ndiyifumane ukuhambisa imifanekiso ngaphezulu.
Esona sityhilelo sikhulu ibe yiNokia N95 yam – ukudubula ngoko nangoko + ukulayisha. Uninzi lweefoto kwibhlog yam ngoku zithathwe ngayo i-5MP ininzi kwaye nangona ingathelekiseki nekhamera efanelekileyo ilungile ngokwaneleyo kwimifanekiso yebhlog.
Ke siza eZooomr, ndiqinisekile ukuba uninzi lwabanye besilindele ukubona ukuba iphetha njani le nto. Ndikwazile ukungena ngale ntsasa kodwa ndifumene ukulayisha imifanekiso kubuhlungu kakhulu, ndingathanda kakhulu ukuthengisa ezinye zeeshoti zam ezingcono, kodwa umlinganiselo wentlungu/ulonwabo awukho mkhulu ngoku.
Juni 3, 2007 ngo-12: 30 PM
Ndikhe ndamkela iFlickr kwangoko kwaye ikhulile kule minyaka imbalwa idlulileyo… kwaye ukucinga ukuba izakuba yinxalenye yomdlalo wevidiyo kwaye ngoku sisisombululo seefoto.
Umhlobo olungileyo kunye nam sisebenza kwisisombululo seplagi yegalari yesithombe se-WordPress esithatha ezona zilungileyo kwiinkqubo ezininzi zeefoto ezingaphandle, njengeFlickr kodwa yenza ukuba zonke iifoto zakho, umboniso, njl njl zilawulwe ngokupheleleyo kwi-WordPress yakho yokufaka. Akukho mfuneko yokuphendula kwizinto zomntu wesithathu.
Sinobungqina obusebenzayo bengcamango kwaye kwiintsuku ezimbalwa ezizayo ziya kuba zilungele ukukhutshwa kwe-1.0.
Ndiza kuqinisekisa ukuba ndiyithumele ngendlela yakho ukuze ukwazi ukuyibetha 🙂
Sivuyisana noBill ngokuphumelela kwisikolo samabanga aphakamileyo kunye neGPA ebalaseleyo.
Inye into engekhoyo kwiifoto zakho ngumfanekiso wakho nonyana wakho… kunjani? hehe… Masibone utata onebhongo 🙂
Juni 3, 2007 ngo-1: 26 PM
Ndijonge phambili ekuboneni oko, Sean. Andikholelwa ukuba uphosile umfanekiso omkhulu wam kunye nonyana wam nentombi – iphakathi!
Juni 3, 2007 ngo-1: 32 PM
Ndiza kuba nobungqina bengcinga kwindawo yam kamva namhlanje kwaye ndiza kukuthumelela i-imeyile.
Wowu. Ndiwukhumbule njani lo mfanekiso wakho nosapho lwakho? Jonga wena, zonke ezinebhongo kunye nezinto.
Jun 4, 2007 ngo-7:32 AM
Sivuyisana kakhulu noBill kunye nakuwe ngokunjalo.
Ukhe wazama http://beta.zooomr.com/?
Kwakhona ukuba ufuna ukukhuphela zonke iifoto zakho kwi-flickr, gcina oku ngesandla ->
Enkosi Doug ngoncedo lwakho ngayo yonke into ye-wordpress 🙂 Undikhuphe kwisuphu ngenye imini 🙂